(Bostäder för unga och äldre)
Dhammaan magaalooyinka waaweyn oo jaamicadaha leh waxaa ku yaal guryo ardayda laga kireeyo. Shuruudda in guryahaa la degaana waxa weeye in lagu qoran yahay jaamicad oo arday laga yahay. Ururka guryaha ardayda oo lagu magacaabo Svenska Studentbostadsföreningen ayaa laga heli karaa warbixin ku saabsan meesha guryahaasi ku yaalliin iyo sida loo la xiriirayo shirkadaha guryahaas kireeya.
Warbixin dheeraad ah waxaa laga akhrisan karaa boggaan: www.sokstudentbostad.se
Waxaa degmooyinka qaarkood ku yaal guryo loogu talagalay dhallinyarada oo lagu magacaabo ungdomsbostäder. Waxaana guryaha badanaaba loogu talagalay dhallinyarada da’doodu ka hooseyso 25 sano ama 30 sano. Qofka deggan guryaha dhallinyarada waa inuu gurigaas ka guuraa marka uu buuxsado 25 sano ama 30 sano.
Guryaha dadka gabowga ah
Waxaa degmooyinka qaarkood ku yaal guryo loogu talagalay waayeelka oo lagu magacaabo seniorlägenheter, oo badanaaba loogu talagalay dadka da’doodu ka weyn tahay 65 sano. Marmar qaarkood da’ inta ka yar ayaa la dejiyaa guryaha waayeelka.
Guryaha waayeelku waxay isugu jiraan kuwo la kireysto iyo kuwo la iibsado. Haddaba si loo helo guri waayeelka loogu talagalay waxaa shuruud ah da’da qofku jiro, laakiin qofkii doonayaa wuxuu sii geli karaa safka isagoo da’diisu inta loogu talagalay ka yar tahay. Haddaba si safka la isaga qoro waa in la la xiriiraa xafiiska gurya-kireynta qaabbilsan oo lagu magacaabo bostadsförmedling.
Adeegga guryaha iyo guryo gaar ah ee waayeelka
(Hemtjänst och särskilda bostäder för äldre)
Dadka gabowga ah oo aan awoodin in ay is maamulaan waxay degmadu siisaa gargaar adeeg iyo guryo gaar ah. Gargaar adeeggu waxa weeye kolka, shaqaale degmada ka socda, ay guriga ugu tagaan qofka gabowga ah oo ka caawinaan naafada, fayadhawrka iyo cuntasiinta.
Haddii ay qofka hayso baahi inta ka weyn waxaa la dejiyaa guryo gaar ah oo loogu talagalay dadka gabowga ah, sida servicehus, ålderdomshem, gruppboende ama sjukhem.
Haddii la doonayo in la codsado gargaarka adeegga ama guryaha gabowga waxaa laga la xiriirayaa xoghayaha gargaarka bulshada ee degmada.